ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သူနာပြုခေါ်ရန်နှင့်အတူဦးခေါင်း Console အအိပ်ရာ China Manufacturer
Hunan Eter Electronic Medical Project Stock Co., Ltd. [Hunan,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Middle East ထုတ်ကုန်:11% - 20% Cert:ISO13485, ISO9001, OHSAS18001, ASME, CE ဖေါ်ပြချက်:ရပ်ကွက်များအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူး Console,ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူး Console စနစ်,သူနာပြုခေါ်ရန်နှင့်အတူအိပ်ရာဌာနမှူး Console
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ် > ရပ်ကွက်များအတွက်အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ် > ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သူနာပြုခေါ်ရန်နှင့်အတူဦးခေါင်း Console အအိပ်ရာ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သူနာပြုခေါ်ရန်နှင့်အတူဦးခေါင်း Console အအိပ်ရာ
ထွက်နိုင်ရေး: 1000pcs per month
မူလအစရာ: Changsha, တရုတ်
HS Code ကို: 7616999000
1.Medical ရပ်ကွက်သူနာပြုခေါ်ရန်နှင့်အတူဦးခေါင်း Console အအိပ်ရာ ဖေါ်ပြချက်
အဆိုပါဆေးရုံရပ်ကွက်အိပ်ရာဌာနမှူးစည် System ကိုမျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel က, သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဘို့အသုံး built-in cabling လိုင်းများအားလျှပ်စစ်နှင့်အားနည်းလျှပ်စစ်မီးနှင့်ပြင်ပယိုစိမ့်ကာကွယ်, ရာဘေးမီးခွက်, ကျယ် Toggle အား switches များ, ငါးပေါက် Multi-function ကို socket, သဘာဝဓာတ်ငွေ့ terminal ကိုနှင့် system တောင်းဆိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်တပ်ဆင်ထားသည် ။ အဆိုပါဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်လျော်သောအရောင်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
2 ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သူနာပြုခေါ်ရန်နှင့်အတူဦးခေါင်း Console အအိပ်ရာ အားသာချက်
1. သမားရိုးကျသုံးကုန်သည်ကြီးများအသင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာထံမှမတူညီသောအဆိုပါ groundbreaking လေး chambered ဖွဲ့စည်းပုံ, ပိုမိုတည်ငြိမ်နှင့်ဘေးကင်းဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။
2. ချောမွေ့နှင့်ကြော့လိုင်းအမျိုးအစားနှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်ဘက်ပေါင်းစုံ panel ကဒီဇိုင်း, အနုပညာ terminal ကိုဖုန်မှုန့်အဖုံးဒီဇိုင်းနှင့်တုနှိုင်းလို့မရနိုင်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ဦးဗေဒအမြင်အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးကာမူထူးခြားတဲ့ဖက်ရှင်ကြုံးဝငျပတျသကျ။
3. ထိုရိုးရှင်းသောအသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းတက်ကြွ add နှင့်ဖက်ရှင်များ၏အသိမြှင့်တင်ရန်ထုံးစံအရောင်လိုင်းများအားဖြင့်ပြည့်စုံစေသည်။
4. မြင့်အစှမျးသတ်တိလူမီနီယံအလွိုင်းက၎င်း၏ရိုးရှင်းပြီးတောက်ပလိုင်းများအတွက်အပြည့်အဝ texture နှင့်တည်ငြိမ်အရောင်နဲ့တောက်ပထင်ဟပ်။
5. အဆိုပါ panel ကိုနှင့်ကို arc ဘုတ်အဖွဲ့, လွတ်လပ်စွာလျချွတ်ဆက်သွယ်ထားသောချိတ်ဆက် panel ကိုနှင့်တပ်ဆင် panel ကိုကမ်းလှမ်းမှု slided နိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းကိရိယာများ switching ၏ 6. အမျိုးမျိုးတပ်ဆင်၏နည်းလမ်းတွေဟာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် installation နဲ့လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေးမှသက်ဆိုင်ရာထားတဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အခြေအနေများကြောင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်, embedded တပ်ဆင်၏လမျးဖွငျ့ panel ကိုအပေါ် fixed နေကြသည်။
သူနာပြုခေါ်ရန်နှင့်အတူ3ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အိပ်ရာဌာနမှူး Console အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်။
Medical Ward Bed Head Console With Nruse Call For Hospital Furniture
Eter 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2016 ခုနှစ်တွင် 839074 ၏စတော့ရှယ်ယာကုဒ်အတူ NEEQ (အမျိုးသား equity Exchange နှင့်ကိုးကားချက်များ) တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ကြိမ်မြောက်။
ဖြေကျနော်တို့ 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။
ဖြေ T / T, L ကို A / C စတာတွေ
သင့်ရဲ့ပေးပို့အချိန် 3. ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ
တစ်ဦးက: အကုန်ပစ္စည်းများစတော့ရှယ်ယာ၌ရှိကြ၏လျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်က 5-10 ရက်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပါကကုန်စည်စတော့ရှယ်ယာထဲမှာမဖြစ်ကြပါလျှင်, ကအရေအတွက်နှင့်ညီသည် 20-30 ရက်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ် > ရပ်ကွက်များအတွက်အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးရုံရပ်ကွက်အိပ်ရာခေါင်းကို panel က
ရပ်ကွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီးများအတွက်ဌာနမှူး Panel ကိုအိပ်ရာ
ရောင်းမည်ဌာနမှူးယူနစ်အိပ်ရာ High Quality ဆေးရုံ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူး Console စနစ်
အမြင့် Qaulity ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်
ရပ်ကွက်များအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူး Console ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူး Console စနစ် သူနာပြုခေါ်ရန်နှင့်အတူအိပ်ရာဌာနမှူး Console ဆေးရုံများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူးစည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူး Console ဆိုင်များတွင်နှင့်အတူဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ် ရပ်ကွက်များအတွက်အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ် အမြင့် Qaulity ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်